काभ्रेका मजदुर नेता लामाले ३ रोगीलाई सहयोग गर्दै मनाए आफ्नो जन्मदिन – NamoBuddha Khabar
काभ्रेका मजदुर नेता लामाले ३ रोगीलाई सहयोग गर्दै मनाए आफ्नो जन्मदिन
शनिबार, भाद्र २७, २०७७ | १९:५५:५९ |
धुलिखेल–राजनीतिक र निर्माण मजदुर व्यावसायिक जीवन भएकोले व्यस्त हुनेनै भयो,यो पटक आफ्नो जन्मदिनमा झनै व्यस्त देखिनुभयो अखिल नेपाल निर्माण मजदुर संघ काभ्रेका अध्यक्ष देव लामा । शनिबार विहानै अध्यक्ष लामाले भन्नुभयो–“शुभकामना शुभेच्छा पाईरहेको छु,विहानैदेखि साथीभाईहरुको फोन आईरहेको छ ।” यो दिन कुनै रेष्टटुरेन्टमा भेला भएर लाखौं फजुल खर्च हुनेगरी तामझामसाथ भोजभतेरको चाँजोपाँजो हैन बरु केहि असहायहरुलाई सहयोग गर्ने योजना बनेछ अध्यक्ष लामाको ।
कोरोना महामारीले गर्दा धेरैसँग भेटघाट गर्ने स्थिति त थिएन नै । लामाले काठमाडौंको टिचिङ(शिक्षण) अस्पताल महाराजगञ्ज लगायतका ३ स्थानमा पुगेर विभिन्न रोगबाट पिडीत भएका ३ जनालाई गच्छेअनुसारको आर्थिक सहयोग गर्नुभयो । विरामी र विरामीको आफन्तहरुलाई भेटेरै अध्यक्ष लामाले आर्थिक सहयोग गर्नुभएको हो ।
लामा दुवै मृगौला फेल भएर टिचिङ अस्पतालमा उपचाररत तेमाल–९, पालुघाट, काभ्रेकी रञ्जना तामाङलाई भेट्न अस्पतालमै पुग्नुभयो । ३५ वषन्त टेकेका लामाले १८ वर्षीया रञ्जनलाई जीवनप्रतिको आस्था दरिलो पार्न आग्रह गर्नुभयो,थप सहयोगको समन्वयकारी भुमिकामा रहने वचन दिनुभयो ।
त्यस्तै दुवै मृगौला फेल भएका तेमाल गाउँपालिका वडा नं. २ का भिमबहादुर तामाङका आफन्तलाई चुच्चेपाटी र बाख्रा चराउन जाँदा भिरबाट लडेर घाइते भएका महाभारत गाउँपालिका वडा नं. ३ सोलिघोप्टेका १२ वर्षिय कान्छालाल योञ्जनका आफन्तलाई भक्तपुरमा भेटेर आर्थिक सहयोग गर्नुभयो । उहाँले रञ्जनालाई ७ हजार रुपैयाँ, कान्छालाला र भिमबहादुरलाई ५/५ हजारका दर आर्थिक सहयोग गर्नुभएको हो ।
सहयोग रकम हस्तान्तरण गर्न युवा समाजसेवी तथा व्यवसायी जगत लामा पुष्प, तेमाल–९ का वडा सदस्य कान्छा लामा,पत्रकार ग्याम्जो लामा लगायत पुग्नुभएको थियो ।
‘यो सानो र सामान्य सहयोग हो । आफ्नो जन्मदिन अनावश्यक खर्चगरी मनाउनुभन्दा थोरै भएपनि असहायलाई सहयोग गर्दा राम्रो लागेकोले यो अवसरमा उहाँहरुलाई सकेको सहयोग गरेको हुँ ।’ अध्यक्ष लामाले भन्नुभयो । साविक नेकपा (माओवादी केन्द्र), तेमाल गाउँपालिका वडा नं. २ का अध्यक्ष समेत रहेका लामाले विगतदेखी नै विभिन्न समस्यामा परेकालाई सहयोग गर्दै आउनुभएको छ ।